DESCAP 1 Private Equity Trust to acquire up to 8 hotels in Thailand | Investment opportunities
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Hotels & Resorts • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Dia lavitra • Other • Naotin'i Resort • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana
DESCAP 1 Trust momba ny fananan-tany manokana hahazoana trano fandraisam-bahiny hatramin'ny 8 any Thailand
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny famatsiam-bola fizahan-tany » DESCAP 1 Trust momba ny fananan-tany manokana hahazoana trano fandraisam-bahiny hatramin'ny 8 any Thailand
Destiny Capital PTE., LTD., (DC) ary KTB Securities (Thailand) Orinasam-panjakana voafetra (KTBST SEC) dia nanambara ny fanombohan'ny DESCAP 1 Private Equity Trust, izay hahazo hotely any Thailand izay mikendry ny fiverenan'ny mpampiasa vola hatramin'ny 15% isan-taona. Ity fanambarana ity dia tonga taorian'ny fifanarahana nanao sonia ny DC miaraka amin'ny KTB Securities (Thailand) Public Company Limited (KTBST SEC) amin'ny maha settl azy sy ny Trust Manager. ary ny MFC Asset Management Public Company Limited (MFC) amin'ny maha-Trustee azy, hitrandraka sy hanokatra ny DESCAP 1 Private Equity Trust.
Ny tanjon'ny DESCAP 1 Private Equity Trust dia ny hanangona THB 2.5 miliara amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa matoky aminy KTBST SEC sy MFC, izay manolotra kilasy fananana hafa ho an'ny portfolio an'ny mpampiasa vola. Ny fitokisana dia hanana hotely kintana efatra an'ny tompony, misy efitrano 150 - 250 any amin'ny toerana itodiana any Bangkok, Pattaya, Hua Hin ary Phuket izay heverina ho toeran-kendrena andrasana hamerina ny haingana indrindra aorian'ny COVID-19.
Ny paikady fampanjariam-bola dia ny fananana trano fandraisam-bahiny an-tanàn-dehibe sy hialana voly ary avy eo manavao, mamerina mametraka azy ireo ary mampiditra azy ireo indray hampitombo ny sandan'ny fananana mba hiteraka fiverenana misy dikany amin'ireo mpampiasa vola. Ny fampiasana ny traikefa azo avy amin'ny Destination Group miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra 24 taona any Thailandy momba ny fividianana, fitantanana ary fivarotana hotely, indrindra mandritra ny fotoam-pahasahiranana, kendrena amin'ny DESCAP1 ny fiverenan'ny pa 15% miaraka amin'ny fe-potoam-piasana 5-7 taona.
"Destination Capital dia hanana, hividy, hametraka indray ary hitantana trano fandraisam-bahiny azon'ny DESCAP 1 Private Equity Trust, miaraka amin'ny KTBST SEC ho Trust Settlor sy Trust Manager ary MFC ho Trustee eo ambanin'ity rafitra voafehin'ny SEC ity," hoy i Andriamatoa James A. Kaplan, Tale jeneralin'ny PTE Destination Capital. LTD. (DC), nanampy hoe "Faly izahay fa manana andraikitra lehibe hanohanana ny famelomana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany Thai miaraka amin'ny fanambaràn'ny DESCAP 1 Private Equity Trust. Ity fitokisana ity dia hampiasa vola amin'ny fananana trano fandraisam-bahiny stratejika hanamorana ny asa indray sy ny fisokafan'ny hotely hamerenana an'i Thailand ho toerana fitetezam-paritany ankafiziny indrindra. Tsy ho vita izany raha tsy nisy ny fanohanan'ny Mpitantana sy Mpitantana anay. ”
Andriamatoa Thitiphat Thaveesin, filoha lefitra mpanatanteraka, Solosaina ara-bola sy orinasa REIT an'ny KTB Securities (Thailand) Company Limited (KTBST SEC) nilaza fa ny tombam-bidin'ny fampiasam-bola DESCAP 1 Fahatokisana fananana manokana dia toy ny manaraka; izao no fotoana mety ahazoana fananana fampiantranoana stratejika amin'ny vidiny ambany (tanjona miaraka amin'ny fihenam-bidy 30% farafahakeliny amin'ny sandam-bola tsy miangatra). DESCAP 1 dia afaka manatsara ny sandan'ny fananana amin'ny alàlan'ny paikadin'ny Destination Capital voaporofo sy ny firaketana an-tsoratra ao anatin'izany ny fanavaozana sy ny fametrahana indray ny fananana. Ny fampiasam-bola amin'ny DESCAP1 dia ao amin'ny kilasy fananana ambany miovaova miaraka amin'ny fiverenan'ny loza mety hitranga amin'ny 15% pa ++. Ankoatr'izay, ny fampiasam-bola amin'ny DESCAP1 dia fomba iray hanohanana sy hamelomana indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany Thai.
DESCAP 1 Private Equity Trust dia manana paikady fampiasam-bola telo, izay
1. Tetika fampiasam-bola izay mifantoka amin'ny fahazoana amoron-dranomasina na eo amoron'ny morontsiraka toa an'i Pattaya, Hua Hin, Phuket, ary toerana fitsangatsanganana lehibe any Thailand. Ho an'i Bangkok, ny fifampitokisana dia mifantoka amin'ny fahazoana trano fandraisam-bahiny amin'ny toerana CBD. Ny fifampitokisana dia hifantoka amin'ny fahazoana eo anelanelan'ny hotely kintana efatra ka hatramin'ny enina hatramin'ny hotely 4 ka hatramin'ny trano fandraisam-bahiny 6 misy trano fandraisam-bahiny kendrena manomboka amin'ny fanalahidy 8 ka hatramin'ny 150 fanalahidy.
2. Sarobidy ny famoronana, ny fifampitokisana dia hampiasa vola amin'ny kilasy fananana ambany miovaova miaraka amin'ny paikady 5R, izay Renovate, Rebuild, Rebrand, Reposition, ary Recapitalization.
3. Paikady ivoahana, IPO / REIT izay mivoaka amin'ny Stock Exchange of Thailand), Fampitambarana sy fahazoana - M&A izay mivarotra ny fizarana amin'ny orinasa lehibe na mety ho mpividy), Varotra-varotra izay mivarotra fizarana na fananana amin'ireo mpamatsy vola hafa, renivohi-paritra, na fampiasam-bola tsy miankina, Buyback izay tompona mividy na fananana mividy, ary fanafoanana izay mivarotra ny fizarana rehetra amin'ireo mety ho mpividy.
DESCAP 1 Fahatokisana fananana manokana manana tanjona mitentina THB 2.5 miliara miaraka amin'ny dimy taona miampy fanalavam-potoana maharitra roa taona. Ny fitokisana dia manana fiverenana kendrena amin'ny 15% isan-taona.
Ny vondrona kendrena ao DESCAP 1 Equity tsy miankina Ny fahatokisana dia mpamatsy vola andrim-panjakana sy / na Mpanjifa avo lenta miaraka amin'ny habetsaky ny fampiasam-bola THB 200 mm isan'olona ary kasaina hapetraka mandritra ny volana novambra 2020. Raha toa ka ambany noho ny THB 200 mm ny vola fampiasam-bola dia avo-Net-Worth Ireo mpamatsy vola dia afaka mampiasa vola amin'ny alàlan'ny Mutual Fund.